हत्या — donnews.com
लेकसाईडमा मिथुन विकको हत्या गरी फरार अभियुक्त ९ वर्षपछि पक्राउ
पोखरा, १० चैत । नौं वर्ष अघि पोखरा लेकसाइडस्थित नेशनल स्कुलमा कक्षा १० मा पढ्ने मिथुन विकको हत्या गरी फरार भएका अभियुक्तलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेको छ । […]
दैलेख, २९ भदौ । गुराँस गाउँपालिकामा एक शिक्षकको घाँटी रेटेर हत्या भएको छ । गाउँपालिकाको छोटेपोखरामा पढाउँदै आएका शिक्षक नगेन्द्र बिसीको गए राति घाँटी रेटेर हत्या गरिएको हो । प्रहरीले […]
रुपन्देही, २९ भदौ । रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा नाबालक छोराको हत्या गरेको अभियोगमा एक दम्पत्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गैडहवा गाउँपालिका–६ स्थित सूर्यपुरामा शनिबार एक दम्पत्तिले आठ महिने शिशु सुरज […]
खुकुरी प्रहारबाट लमजुङमा एक युवाको हत्या
लमजुङ । लमजुङमा खुकुरी प्रहारबाट घाईते भएको एक युवाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । राईनास नगरपालिका–९ का २२ वर्षीय सुधिन आले खुकुरी प्रहारबाट घाईते भएका थिए । घाईते आलेलाई […]
जलेश्वर, ९ भदौ । महोत्तरी जिल्ला अदालतले छोरालाई घाँटी थिचेर हत्या गरेको आरोपमा एक सौतेनी आमालाई जेल चलान गरेको छ । जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिका–६ बस्ने चन्द्रकिशोर यादवकी कान्छी पत्नी २० […]
बैतडी, ९ भदौ । डिलाशैनी गाउँपालिकामा एक आमाले नवजात शिशुको हत्या गरेकी छन् । वडा नं ७ ढाँणकी ३५ वर्षीया माधवी कार्कीले नवजात शिशुको घाँटी निमोठेर हत्या गरेकी हुन् । […]
आफ्नै बुबा र श्रीमतीको हत्या गरी गाडेको अवस्थामा शव फेला
धनुषा, ८ भदौ । धनुषामा एक युवकले आफ्नै बुबा र श्रीमतीको हत्या गरेर एउटै खाल्डोमा गाडेको अवस्थामा शव फेला परेको छ । हत्या आरोपमा युवक पक्राउ परेका छन् । जिल्ला […]
१७ वर्षे कोपिलाको हत्या आरोपमा खड्कबहादुर पक्राउ
पोखरा । मामाको घरमा बस्दै आएकी एक बालिकाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका वडा नं. ६ चालिसेका ४५ बर्षीय रामबहादुर थापा (मोटे) भनेर चिनिने खड्कबहादुर खवासलाई १४ […]
नवजात शिशुको हत्या गरी फरार प्रेमबहादुर १८ वर्षपछि पक्राउ
तनहुँ । नवजात शिशुको हत्या गरेको आरोपमा जन्मकैंदको फरार तनहँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नं. १ का ५१ वर्षीय प्रेमबहादुर सार्कीलाई प्रहरीले १८ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । प्रेमबहादुरलाई तनहुँ जिल्ला […]
श्रीमतीलाई सिलौटाको लोरोले टाउकोमा हानेर हत्या
पोखरा । आफ्नै श्रीमानले सिलौटाको लोराले हान्दा ५५ वर्षीया श्रीमाया कामीको आज मंगलबार मृत्यु भएको छ । कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. २ बाझाखेत बस्ने ६५ बर्षीय श्रीराम कामीले मादक […]
कपिलवस्तुका माओवादी नेताको हत्यामा श्रीमतीकै संलग्नता
काठमाडौं । कपिलवस्तुका माओवादी नेता दीपक पाण्डेयको हत्यामा उनकै श्रीमतीको संलग्नता भेटिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता पाण्डेयलाई आफ्नै श्रीमतीसहितको ११ जनाको टोली मिलेर हत्या […]